Môngôlia - Wikipedia
Repoblikan'i Môngôlia ((mg))
Teny ofisialy Mongoliana (fitenim-panjakana)
Renivohitra Ulan Bator
Tanàna lehibe indrindra Ulan Bator
- Rano (%) faha 18
- Tontaliny (2019)
- hakitroka faha 138
3 256 176 mpo.
Anaran'ny mponina Mongoliana
Sandam-bola Tögrög (MNT)
I Môngôlia dia firenena ao Azia Atsinanana, tsy manana morontsiraka, eo anelanelan' i Rosia (ao avaratra) sy i Sina (ao atsimo). Ny renivohiny dia i Ulan Bator. Ny tanàna lehibe indrindra dia ny renivohiny. Mirefy 1 564 115,75 km2 ny velaran-taniny ary miisa 3 168 026 ny mponina ao aminy tamin' ny taona 2020. Ny faritr' ora dia +7 hatramin' ny +8. Mizara roa ny taniny, raha ny vohon-tany sy ny toetrandro no heverina: i Môngôlia an-tendrombohitra, ao avaratra-andrefana, sy ny Efitr’ i Gobi, ao atsimo.
Sarin-tanin' i Môngôlia
Ny 75 %n’ ny mponina any Môngôlia dia Môngôly Kalka, nefa ahitana vahoaka vitsy an’ isa maro koa ao. Ny bodisma sy ny samanisma no finoana be mpanaraka any. Lasa firenena be tanàn-dehibe voalamina i Môngôlia tamin’ ny faramparan’ ny taonjato faha-20: mihatra ny 50 %n’ ny mponina no monina an-tanàn-dehibe. Ny fiompiana no isan’ ny sehatr’ asa ara-toekarena mibahan-toerana any amin’ io firenena io. Mirorobo ihany koa ny taozava-baventy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Môngôlia&oldid=1046108"
Dernière modification le 4 Jolay 2022, à 09:44
Voaova farany tamin'ny 4 Jolay 2022 amin'ny 09:44 ity pejy ity.